Lasa Tsenaben’ny Fanaraha-maso Ara-Teknolojia i Brezila · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 31 Oktobra 2013 16:50 GMT
Vakio amin'ny teny Español, Català, English, Français, русский, Português
Nahazo fifanarahana amin'ireo renivohitra maro ao Brezila ny Mpanaramaso Goavana mandritry ny lalao 2014 – fiambenana skanera baikona ara-tsolosaina avy lavitra. Sary: Agência Pública
Ity lahatsoratra ity, dia nosoratan'i Bruno Fonseca, Jessica Mota, Luiza Bodenmüller ary Natalia Viana,navoaka voalohany ny 6 Septambra 2013 tao amin'ny Agência Pública ary ampahan'ny #SpyFiles3.
Fotoana fohy taorian'ny filazana momba ny fitsikilovana ataon'ny Sampam-pitsikilovana Amerikana NSA, ny Prezida Dilma Rouseff dia niresaka tamin'ny ministra Paulo Bernardo (Serasera) sy José Eduardo Cardozo (Fitsarana) ny hampiditra ao amin'ny Marco Civil da Internet,[Satan'ny Mpiserasera Breziliana] fifanarahana amin'ireo mpampiasa aterineto Breziliana, hampiato ny asan'ireo orinasa miara miasa amin'ny fitaovam-pitsikilovana maneren-tany. “Voakasika amin'izany ny banky, ny kaompania tserasera,” hoy ny Minisitry ny Serasera.
Saingy azon'ny orinasa marorantsana iraisam-pirenena momba ny fanaraha-maso iantohana ihany koa ny fiarovana ny dosie saropady, raha hita fa mitana ny ampahany betsaka amin'ny tinady ho amin'ny fanaraha-maso ny amboara eran-tany ireo goavan'ny fanaraha-maso ireo – ireo kaompania ireo ihany koa no manome fitaovana ny ankamaroan'ny polisy maneran-tany, hatramin'ny fitondrana Amerikanina ary ny NSA.
Maro amin'ireo no voatonotonona matetika ao amin'ny Wikileaks, anisan'ny Spy Files 3 project, izay fitambaran'ny dosie 249 avy amin'ny kaompania 92, ka anatin'izany ny ravi-taratasy, fifanarahana ary dosie maro milazalaza ny momba ny aferan'ireo lohalaharana amin'io sehatra io. Asehony fa, noho ny fisian'ilay fotoana goavana dia goavana, dia lasa vaidohan-draharahan'ny orinasan'ny fanarahamaso ara-indostria i Brezila.
Ny Sekretarià Manokana Momba ny Seho Goavana (SESGE) dia nahazo teknolojia maro ho amin'ny fitandroana ny filaminam-bahoaka. Roa tapitrisa reais Breziliana [manodidina ny 87 Tapitrisa dolara] no lany tamin'ny fifanarahana eo amin'ny sehatra nasionaly. Ary manararaotra tsara amin'ity fotoan-dehibe eo amin'ny firenena ity mihitsy moa ny indositrian'io sehatry ny fanarahamaso io. Taona vitsivitsy zay, maro tokoa ny foaran'ny indostria nitranga tao amin'ny firenena.
Rehefa tafiaraka ny manam-pahaizana amin'ny fanarahamaso
Tamin'ny Jolay, tao Brazilia dia i anjaran’ISS World no mampivory sy mampiofana ny polisy, ny mpitandro filaminana ary ny manam-pahaizana momba ny fanadihadina amin'ny fisamboram-peo sy sary mifanaraka amin'ny lalàna. Noho ny famatsiam-bola avy amin'ireo goavan'io sehatra io, toy ny Gamma Gropy, Hackingtean, Cobhan Surveillance, Hidden Technology, GlimmerGlass ary ny Suntech Breziliana, dia ny talen'ireo voatonona ireo no manentana ao amin'ny atrikasa.
Misy ohatra ny lesona sasany mampianatra amin'ny mpandray anjara ny fomba fampiasana ny tambajotran'ny fiarahamonina ho fitaovana malalaka amin'ny fanaovana fanadihadina heloka bevava, na ny fomba hampiasana tsara kokoa ny facebook: miainga amin'ny fiarovana ao amin'ny Facebook ka hatramin'ny fitazonana tahirin-kevitra sy ny fiarahana miasa eo amin'ny mpitandro ny filaminana. Misy fiofanana, atolotry ny Vondrona 2000 Neerlandey, niresaka momba ny fisamborana onjam-peo sy sary eo amin'ny sehatra nasionaly, ampiarahana amin'ny LBS (Tolotra Famantarana ny misy ny tena) – rindram-pandrindrana solosaina ahafahana mampiditra ny toerana sy ny ora ao amin'ny rafitra iray nampiasaina. Ny orinasa lehibe IPS no niresaka ny lohahevitra momba ny tambajotran'ny fiarahamonina sy ny fifanoratana eo noho eo: Ny arsitektioran'ny Big Data ho amin'ny fisamborana faobe, ankoatra ny lesona momba ny “Kingan'ny fitsofohana”. Ny Kompania Breziliana Suntech, ao anatin'ny Vondron'asa Amerikanina Verint amin'izao fotoana izao, no niantoka manontolo ny androm-piofanana, indrindra fa ny lesona manokana ny momba ny fitsikilovana ara-pifandraisan-davitra.
Ankoatra ny ISS, ny LAAD ( Fiarovana Anabakabaka Latina Amerikana), ny fampirantiana ara-barotra lehibe momba ny fiarovana sy ny filaminana dia efa nomanina tany Brezila hatramin'ny taona 1995, ary tohanan'ny Minisiteran'ny Fiarovana sy ny Minisiteran'ny Fitsarana. Taona vitsy izay, nifantoka tamin'ity karazam-poara, itoeran'ny adivarotra ara-pifanarahana eo amin'ny sehatra goavana amin'itony vondron'asa itony.
Tamin'ny 2011, ohatra, ny Minisiteran'ny Fiarovana nanambara vinan'asa momba ny Ivo Fanarahamaso ny Sisin-tany (SISFRON), miorina amin'ny tambajotran-pisamboram-peo mifandray amin'ny rafi-pibaikoana sy fanaraha-maso. Tian'ny tafika nafainganina ny fanorenanana ilay rafitra noho ny fisian'ny Amboara eran-tany sy ny lalao Olaimpika. Nanatsara ny tsena iraisampirenena ny tombam-bidin'izany, 6 na 7 miliara reais [eo amin'ny 2,7 na 3,1 miliara dolara]. Ny antony, na dia nomena ny orinasam-pirenena Embraer ny fampijoroana ny tetikasa, ny vondrona Saab avy any Soeda, dia namoaka fa ny sampany alemana ao amin'ny MEDAV, noho ny fifanarahan'ny roa tonta, no hampitao ny toby tsy mihetsika sy mifindrafindra momba ny fandraisan'onjam-peo sy sary amin'ny maha-mpamita ny asa azy amin'ny rafitra famantarana ny onja HF, VHF, ary UHF.
Tamin'ity taona ity dia 30.000 no nanatrika ny LAAD, izay mampiantrano mpampiranty 720 avy amin'ny firenena 35, anisan'ireo ny Ministeran'ny Fiarovana avy any Okraina, Fanjakana Miray (UK), Arzantina ary Afrika Atsimo. Amin'ny 2014, taonan'ny Amboara eran-tany, dia misy versiona kely, eo amin'ny sehatry ny filaminana irery ihany, notontosaina tamin'ny 8-10 Aprily 2010 tao Riocentro.
Ho avy ny tapany faharoa amin'ity lahatsoratra ity.